दुबईमा एक Uber चालक बन्यो - कामका लागि क्यारेम र आरटीए गाइड। 👳
दुबई र ट्याक्सी चालक मा एक Uber चालक बनने को लागि मार्गदर्शक
दुबई शहरमा विदेशी नौलो रिक्तिकाहरू 🥇
एक्सटेटोमन दुबई - एक नौकरी खोज्नुहोस मध्य पूर्व मा 🥇
दुबईमा एक Uber चालक बन्यो
दुबईमा एक Uber चालक बन्यो। दुबईमा उबर चालक बन्नु। जागिर खोज्नेहरू सफा ड्राइविंग रेकर्ड हुनै पर्दछ। अर्को तर्फ, एक कार कम्पनी वा मा कार सेवा द्वारा रोजगार दुबई। र 21 को न्यूनतम उमेर आवश्यकता पूरा गर्नुहोस्। सम्भावित ड्राइभरहरूले छोटो प्रशिक्षण भिडियो पनि हेर्नुपर्दछ। आवश्यक दस्तावेज संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि मान्य दुबई ड्राइभिंग इजाजतपत्र र एमिरेट्स आईडी वा निवासको प्रमाण हो। यसले ड्राइभरले पैसा कमाउन सक्ने तरीकाले अनुमति दिन्छ जुन उनीहरूलाई उचित छ।
Uber सँग दुबईमा कसरी सुरू गर्ने?
तुरुन्तै गाइड गर्न को लागि Uber संग शुरू गर्न को लागी?
चरण संख्या 1 - Uber संग अनलाइन साइन अप गर्नुहोस्
केवल सुरु गर्न तपाईंलाई केवल एउटा इमेल ठेगाना र मोबाइल फोन चाहिन्छ !. राम्रो छ, अब Uber कम्पनी आफैलाई र तपाईंको ड्राइभिंग अनुभवको बारेमा एकदम बढी बताउनुहोस्, र कम्पनीले तपाईलाई सुरू गर्यो।
🚕 अब साइन अप
चरण संख्या2-त्यो आफ्नो आईडी र केहि जानकारी अपलोड गर्नुहोस्
जस्तो तपाईलाई शंका लाग्छ तपाईलाई केहि कागजी कार्यहरू छन् तपाईले जारी राख्नका लागि अनुसरण गर्नु पर्छ। त्यहाँ केहि कागजातहरू छन् जुन uber कम्पनीले हेर्न आवश्यक छ तपाईंको अनुप्रयोग समीक्षा हुनेछ अघि.
यदि तपाइँ संयुक्त अरब अमीरातमा दुबई वा अब्बाबामा चालक हुनुहुन्छ भने:
मान्य आरटीए कार्ड
तपाईंसँग मान्य अमीरात आइडी हुनुपर्छ
मान्य आरटीए दर्ता गरिएको वाहन मुल्किया
तपाईंसँग चालक प्रोफाइल प्रोफाइल हुनुपर्छ र उबर कम्पनीमा पठाउनु पर्छ।
अग्रगामी-सामना हुनु पर्छ, धूम-चश्माको साथ ड्राइभरको पूर्ण अनुहार र क्यान्सरको माथि समेत केन्द्रित फोटो हुनुपर्छ
फ्रेम मात्र, राम्रो लगाइएको, र फोकसमा अन्य विषयसँग ड्राइभरको फोटो मात्र हुनुपर्छ। यो चालकको इजाजत पत्र फोटो वा अन्य मुद्रित तस्बिर हुन सक्दैन।
चरण संख्या3- कम इञ्जिन / पेट्रोल पाउनुहोस् र गाडी जान तयार छ!
तपाईंको लागि उत्तम कार सही के हो? निश्चित रूपमा सस्तो सानो इञ्जिन गाडी। यसका साथै, निश्चित गर्नुहोस् कि यसले उबर आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र मानकहरू जुन संयुक्त अरब एमिरेट्समा लागू हुन्छ.
उत्कृष्ट स्मार्ट र सधैं सम्झनुहोस् !. यदि तपाइँ कम लागतमा कायम राख्ने कारहरूमा आफ्नो खर्च राख्नुहुन्छ भने तपाईले थप दरहोम बनाउनुहुनेछ।
तथापि, हो, तपाईसँग अझै पनि साइन अप गर्न सक्नु भए तापनि तपाईंसँग योग्य गाडी छैन। हाम्रो जाँच गर्नुहोस् Uber कारहरुको समाधान.
🚕 स्वास्थ्य आवश्यकताहरू
चरण संख्या4- आफ्नो खाता सक्रिय गर्नुहोस् र उबर पैसा बनाउनुहोस्!
अब, यदि तपाईंले प्रबन्ध गर्नुभयो दुबई मा हाम्रो गाइड अनुसरण गर्न र माथिका सबै चरणहरू सकियो। तपाई दुबईको उबरमा काम पाउन सक्षम हुनुपर्दछ। धेरै चाँडै उबरले तपाइँको खाता सक्रिय गर्दछ तपाइँ तपाइँको खाता सक्रिय गर्न को लागी तयार हुनेछ ज्यादातर केसहरु 24h लाई 48h सम्म लिन र तपाई निश्चित रूपमा दिरहम बनाउन थाल्नुहुनेछ.
दुबईमा उबर चालक कसरी गर्ने
त्यहाँ धेरै छन् दुबईमा इमिरेट्स अफिसहरू। लचीलापन र स्वतन्त्रताका लागि, यूबर शायद उत्तम विकल्प हो। दुबईमा उबर कार्यहरू प्राप्त गर्न, उबर वेबसाइटमा जानुहोस्। साइन अप अपरेसन दर्ता भर्नाको रूपमा सजिलो छ। दुबई मा एक यूबर चालक बनने को केहि मामलाहरु लाई समय ले रहे हो। अर्कोतर्फ, त्यहाँ धेरै घण्टा छन् जहाँ तपाईं कम से कम मजदूरी बनाउनुहुनेछ।
तर तपाईंसँग ट्याक्सी ड्राइभर इजाजतपत्र हुनु आवश्यक पर्दैन र तपाईं सँधै अर्को कम्पनीको लागि पनि ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो खाडी क्षेत्रको करीम ट्याक्सी। त्यसो भए, लामो समय सम्म जब तपाईले केही अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईले देख्नुहुनेछ कि कसरी राम्रो पैसा कमाउने.
Uber दुबईमा कसरी काम गर्दछ?
दुबईमा उबर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे तपाइँ जान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विश्वको बाँकी ठाउँहरूमा पनि उबर प्रयोग गर्न, एप डाउनलोड गर्नुहोस्, तपाईंको भाँडाको लागि खोजी गर्नुहोस्, र दुबईमा तपाईंलाई मनपर्ने उबर राइडहरूको प्रकार छनौट गर्नुहोस्। भुक्तान अनुप्रयोगको माध्यमबाट गरिन्छ र तुरुन्तै स्थानान्तरण गरिन्छ। दुबईमा तीन विभिन्न स्तरका उबर छन् - प्रयोगकर्ता चयन छ प्रीमियम सेवा र एक उच्च दर को लागी लक्जरी कार प्रस्ताव गर्दछ; उबर कालो जुन मूल उबर सेवा हो; UberXL जुन ठूलो समूहहरूको लागि हो वा केवल ठूलो सवारीको लागि आवश्यक छ। यसको मतलब यो छ कि उबर दुबई बाट एक दायरा प्रदान गर्दछ प्रीमियम यात्रा मानक.
Uber एक दिन 24 घण्टा उपलब्ध छ, हप्तामा7दिन। अनुप्रयोग प्रयोग गर्दै, सवारीहरू दिन वा राति कुनै पनि समयमा उबर अनुरोध गर्न सक्षम छन्। एपले आफ्नो चालकको वाहन र वाहनको विवरणहरूलाई प्रत्येक पटक दुवै पक्षको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सवार सवार देखाउनेछ। त्यहाँ वास्तविक समयमा चालक ट्र्याक गर्ने क्षमता पनि छ जब तिनीहरू आइपुगेका छन्।
दुबईमा ट्याक्सीको औसत लागत 44 एण्ड को लागि 10 एडी (अरब अमीरात दिर्हाम) को आसपास छ। Uber संग, यो 28 एईडी नजिकको दूरीको नजिकै छ। दुबईमा औसत उबर वेतन प्रति घंटा 30-50 AED छ।
Uber, चालक छनौट कसरी गर्ने?
उबर फोन अनुप्रयोगले स्थानीय क्षेत्रमा ड्राइभरहरूमा यातायातको लागि तपाईंको अनुरोध पठाउँदछ। यि ड्राइभर मध्ये एक पछि स्वीकार्छ काम र तपाईंलाई तपाईंको गन्तव्यबाट संकलन गर्दछ। यस प्रणालीको कारण, उबरले तपाईंलाई विशिष्ट ड्राइभरहरूको साथ मिलाउन सक्षम छैन। तपाईंको यात्रा पछि, त्यहाँ अज्ञात प्रतिक्रिया प्रदान गरेर तपाईंको ड्राइभरलाई दर्जा दिन विकल्प छ। उबरले त्यसपछि यो जानकारी प्रयोग गर्न सक्दछ तिनीहरूका सेवाहरू अपेक्षित स्तरमा रहनको लागि। दुबईमा उबर चालक बन्ने यो यसको लायक छ।
UberXL के हो?
Uber धेरै सेवाहरू छन्। उदाहरणका एक Uber XL हो। यो उबर कम्पनी मा एकदम अलग सेवा छ। Uber XL एक सस्ती कार सेवा हो जसले तपाईंलाई एसयूवी र मानक ब्यबसाय भन्दा धेरै ठूलो कारहरु लाई चलाउन दिन्छ।
UberXL के हो? यो एक सरल बनाइएको विशेष भाइ भाइ कम्पनी को लागि छ। त्यसैले त्यो कम्पनीसँग काम गर्दै तपाईं एक कारमा रहेको व्यक्तिको गुच्छा हुने निश्चित हुनेछ जुन निश्चित छ। UberXL यो केवल एक अधिक विशाल सवारी प्रकार को सेवा हो जुन तपाईं ग्राहकहरु लाई प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं निश्चित रूपमा प्वालमा प्वालमा पैसा बिना मानिसहरुलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, UberXL कार सेवा हो जुन तपाईले प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। Uber XL मा काम गर्दा तपाईं एक SUV वा minivan मा ग्राहकहरु छान्नुहुनेछ। धेरै जसो कारहरू कम्तिमा 6-8 व्यक्तिहरू फिट गर्न सक्छन् त्यसैले यो पार्टी वा परिवार बैठक को लागी राम्रो छ.
उबर चालक कसरी भइरहेको छ?
अगस्त 2013 मा यसको प्रक्षेपण पछि, Uber in संयुक्त अरब एमिरेट्स एक शक्ति देखि मजबुत मा गएको छ। अनलाईनमा स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध हुने जानकारीले सुझाव दिन्छ कि उबरले मानक ट्याक्सीहरू भन्दा 30% बढी चार्ज गर्न आवश्यक छ, अन्य डाटाले पनि अनलाइन उपलब्ध गराउँदछ कि उबरले चार्ज गरेको वास्तविक भाडा विश्वको अन्य ठाउँमा अनुकूल छ, र 'सामान्य' ट्याक्सीहरू भन्दा सस्तो छ जुन छ केहि उबरले उनीहरूको व्यवसाय मोडेलमा आधार दिन्छ, र गर्व गर्दछ।
यसका लागि विनियमनको कारणले गर्दा यूबर चालकहरूले लिमोसिन कम्पनीको लागि काम गर्नुपर्दछ, चालकहरूले आफ्नो शुल्कलाई नियोक्ता र उबरको साथमा साझेदारी गर्नुपर्दछ, यसको मतलब हो कि उनीहरुले जित्न सक्नु हुँदैन जुन यो स्थानमा हुँदैन। यो पनि अर्थ हो कि Uber चालकहरू सामान्यतया हुन्छन् एक भारतीय exat को रूप मा काम गर्न अनुबंधित, र स्वर अवधिको समयमा Uber मा स्विच गर्नुहोस्। निस्सन्देह, यसको अर्थ यो हो कि उबर मात्र आय छैन जुन उनीहरूले आशा गर्न सक्दछन्, यो सबै चालकहरूको लागि बढी आकर्षक बनाउन।
परम्परागत टैक्सी सेवाहरूको विपरीत, Uber ड्राइवरहरूले उबरलाई भाडाको मूल्य तिर्न सक्दैनन् काम गर्न, न त तिनीहरूले सेट घण्टा काम गर्ने आशा गर्दछन्। Uber संग, चालकले आफ्नै कार्यक्रमहरू सेट र सेट गर्न सक्छन्, यसैले, धेरै काम गर्छ वा धेरै जसो जस्तै काम गर्दछ।
Uber संग ड्राइभिंग सुरू गर्नुहोस्
यहाँ लागू: https://www.uber.com/drive/requirements/
संयुक्त अरब अमीरातमा यूबरसँग कसरी ड्राइभ गर्ने ?. उबर कम्पनी वास्तवमा आफ्नो अद्भुत सेवाहरू सुरू गर्न एक सजिलो तरिका हो। बस आफ्नो वेबसाइट मा गाई र तपाईं एक जा सकते हो !.
दुबईमा उबर एक उत्तम तरिका हो तपाईंको आफ्नै मालिक बन्न र युएई जस्ता धेरै हार्ड बजारमा पैसा कमाउन। तपाई मात्र खुशी हुनुहुने छैन तर धेरै मानिसहरू उबरको साथ ड्राईभ गर्न योग्य छन्। र तिनीहरू दुबईमा उबरको साथ पैसा कमाउँदैछन्। उदाहरण को लागी, भारतीय र पाकिस्तानीले दुबईमा उबरको लागि काम गरेर पहिले नै पैसा कमाउँदैछन्.
वास्तवमा तपाईले धेरै जान्नु आवश्यक छ यदि तपाई दुबई वा उबेरको साथ अबु धाबीमा गाडी हाँक्दै हुनुहुन्छ भने। र यी शहरहरू अचम्मका ठाउँहरू छन् किनकि त्यहाँ लगभग 24h छ पैसा कमाउने सम्भावना.
Uber जस्तै अन्य कम्पनीहरूले तपाईसँग काम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ
क्यारियर कप्तान (दुबई)
यहाँ लागू: https://drive.careem.com/
क्यारिम क्याप्टन यो अर्को कम्पनी हो जुन हेर्नु पर्छ, तपाईं काम गर्न सक्नुहुन्छ वास्तवमा क्यार्म कप्तानको साथ एक उबर ड्राइभरको रूपमा।
1। वेबसाइटमा आफैलाई दर्ता गर्नुहोस्: त्यसपछि वेबसाइट धेरै माथि सजिलो रूपमा फारम पूरा गर्नुहोस् र क्यामेरा कप्तान हुन लागी आवेदन गर्नुहोस्।
2। जब तपाइँ उनीहरूको टोलीबाट फोन कल प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाइँसँग धेरै आधारभूत प्रशिक्षण हुनुपर्दछ। तपाईंको आवेदन क्यारियर कप्तान कम्पनीको पुनरावलोकन पछि तपाईंलाई प्रशिक्षण सत्रको लागि निम्तो दिन्छ।
3। दुबईमा सवारी गर्नुहोस् र पैसा कमाउनुहोस्। जब प्रशिक्षण पूरा हुन्छ, तपाईं पैसा कमाउन शुरू गर्न सक्नुहुन्छ!.
आज के क्यारेम कप्तानको साथ सुरू गर्नुहोस्!
Talixo कम्पनी (दुबई)
यहाँ लागू: https://talixo.com/careers/
टालिक्सो कम्पनी अब दुबई मा आफ्नो ट्याक्सी बुक। यो उनीहरूको वेबसाइटले भनेको हो र यो पक्कै एक सही कथन हो। ट्यालेक्सोको साथ तपाई ट्याक्सी ड्राइभिंग, इकोनोमी क्लास र व्यवसाय वर्ग रोजगार अवसरहरू.
यस कम्पनीको राम्रो बिन्दु भनेको छ कि तालिक संस्था बिश्वव्यापी 949 शहरहरूमा उपलब्ध छ। र त्यो तपाईंलाई दिदैछ तपाइँको क्यारियर मा एक धेरै बचाउन शुरू ट्याक्सी चालकको रूपमा। हामी यसको मतलब के हो? त्यहाँ एक ठूलो आश्वासन छ कि तपाईं आफ्नो पैसा एक समय र प्रभावी मामलाहरूमा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
आरटीए टैक्सी (दुबई)
यहाँ लागू: https://www.rta.ae/links/special_needs/en/taxi.html
ठीक छ, आरटीए ट्याक्सीको साथ काम पाउन तपाईंले थोरै मेहनत गर्न आवश्यक पर्दछ। आरटीए ट्याक्सी यो सरकार सम्बन्धित कम्पनी हो। त्यसोभए त्यहाँ काम गर्दा यो एकदम राम्रो छ र सबै कुरा ज्यालाका साथ ठीक हुनुपर्दछ र सेव रोजगार प्रदान गरिनेछ।
तर अर्कोतर्फ, आरटीए ट्याक्सीको साथ काम पाउन निश्चित रूपमा प्राप्त गर्न एकदम गाह्रो काम हुनेछ। तर जस्तो एक्सप्याट गाईडहरू - दुबई शहर कम्पनी टीम सधैं कम्पनीहरूलाई कल दिन एक्सट्याट्सलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई अधिक जानकारीको लागि सोध्दै।
टैक्सी निगम (दुबई)
यहाँ लागू: https://www.dubaitaxi.ae/en/Careers
संयुक्त अरब एमिरेट्समा उच्च श्रेणीको रोजगार प्रस्ताव र उत्तम ट्याक्सी सेवाहरू। सामान्यतया, दुबई मा एक उबर ड्राइभर बन्न दुबई ट्याक्सी समान कुरा छैन। यस फर्मको साथ, तपाईं पूर्ण-समय रोजगार हुनेछ र धेरै जसो केसहरूमा अद्भुत कार ड्राइभ गर्न। दुबई ट्याक्सी कर्पोरेशनले उनीहरूको फ्लीटमा टेस्ला र मर्सिडिज जस्ता कारहरू प्रदान गर्दै छ। त्यसोभए, तपाईंले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा: यो कम्पनी निजी यात्रा सेवाहरूको खेलमा शीर्ष कुकुर हो।
यदि तपाईं चौफेर र ट्याक्सी ड्राइभिंगमा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले निश्चित रूपमा उनीहरूलाई कल दिनुहोस् वा उनीहरूको वेबसाइटहरूमा अद्यावधिक गरिएको जानकारीमा एक नजर राख्नु पर्छ। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो थाहा छ कम्पनीले Expats कामदारहरूको लागि धेरै राम्रो पैसा तिर्दछ.
वन रोड टैक्सी LLC
यहाँ लागू: http://www.oneroadtaxi.com/career.htm
एक रोड टैक्सी भर्ती छ संयुक्त अरब एमिरेट्समा। त्यसोभए, यदि तपाईं हाम्रो बढ्दो संगठनको भाग बन्न चाहनुहुन्छ भने। तपाईंले निश्चित रूपमा यस फर्मसँग कुरा गर्नुपर्छ। वन रोड ट्याक्सीको प्रबन्ध हेरिरहेको छ नयाँ स्टाफ अधिकारीहरू भाडामा लिन.
यो कम्पनी सधैं नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरूको खोजीमा रहन्छ। त्यसो भए, सबै देशका व्यवसाय सदस्यहरू उनीहरूको व्यवसायमा ट्याक्सी ड्राइभरको रूपमा काम गर्न सक्दछन्। जहाँसम्म, यदि तपाईं उत्कट र वफादारीको साथ व्यक्ति हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई मद्दतको लागि समयमै पुग्न मद्दतको लागि। कृपया वन रोड ट्याक्सीमा हेर्नुहोस् दुबई शहर मा वर्तमान खाली पदहरू.
सुरक्षित ट्रांस मलाई (दुबई)
यहाँ लागू: http://www.safetransme.com/index.html
राम्रो संग स्थिति र सुपर गुगल ओरिएंटेड कम्पनी धेरै व्यक्तिहरूले यस संगठनको प्रयोग गरिरहेका छन्। यो कम्पनी एउटा व्यापार चलाउनको लागि उत्सुक छ। यद्यपि तिनीहरूको वेबसाइटमा कुनै पनि क्यारियर सेक्सन फेला पार्न कुनै तरिका छैन। तर, सामान्यतया बोल्दै उनीहरूलाई कल गर्न लायक छ उनीहरूलाई केहि खाली पदहरू छन् कि भनेर सोध्दै ट्याक्सी चालकको रूपमा।
सिटी टैक्सी AE (दुबई)
यहाँ लागू: http://www.citytaxi.ae
सिटी ट्याक्सी एकदम पुरानो कम्पनी हो। सरल किनभने शहर ट्याक्सी AE 1983 वर्ष मा स्थापित भयो। अपरेशन को वर्ष को लागी, कम्पनी को रूप मा धेरै सेवाहरु मा विशिष्ट कुनै पनि स्थानबाट दुबई र अबु धाबीमा मानिसहरूलाई ट्रान्सफर गर्दै र विदेशमा पनि। कम्पनीले यातायातका लागि सानो वाहन प्रयोग गरिरहेको छ।
यस कम्पनीको लागि धेरै राम्रो बुँदा यो छ कि तिनीहरूले काममा लिइरहेका छन्। तपाईं आफ्नो वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ र वेबसाइटमा तपाइँको सीभीको साथ सीधा आवेदन दिनुहोस्। केवल तिनीहरूको कम्पनीमा जानुहोस् वा तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कल दिनुहोस्। सिटी ट्याक्सीका प्रबन्धकहरू खुशी हुनेछन् तपाईंलाई रोजगार पाउन मद्दत गर्न दुबईमा ट्याक्सी चालकको रूपमा।
अरबौ ट्याक्सी (दुबई)
यहाँ लागू: http://www.arabiataxi.ae/Dubai/en/career.html
अरेबिया ट्याक्सी दुबई वा अबु धाबीमा उबर ड्राइभर बन्नको लागि केही गर्नुपर्दैन तर हामीले यस कम्पनीलाई पनि हाम्रो सूचीमा राख्यौं। किनकि हामी विश्वास गर्दछौं कि t तपाईंलाई मद्दत गर्दछ युएईमा कडा कठोर बजारमा रोजगार खोज्ने लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्.
यो कम्पनी युएईमा बढ्दो संगठन हो। यस समयमा तिनीहरू एक्लो कम्पनी हुन् जसले पूर्ण पालना पाउँदछन् संयुक्त अरब अमीरातमा सडक यातायात प्राधिकरणको लागि। अरेबिया ट्याक्सी एक योग्य कम्पनी हो जस्तो देखिनु पर्छ सम्भावित नौकरी खोज्ने.
कारहरु ट्याक्सी (दुबई)
यहाँ लागू: http://www.carstaxi.ae/en/public/page/contact
यो कम्पनी दुबईमा मात्र अपरेट गर्दछ। यो कम्पनी धेरै धेरै अरबी संस्कृति र सँधै संयुक्त अरब एमिरेट्समा लागू हुने सबै नियमहरूको साथ अगाडि जान कोशिस गर्दैछु। जस्तो कि संगठनमा सम्मिलित हुन तपाईंलाई धेरै विकल्पमा पुग्नको लागि संभावना दिनेछ तपाईंको जीवन र अरबी सपनाहरूको लागि.
शारजाह टैक्सी (दुबई)
यहाँ लागू: https://www.shjtaxi.ae/careers
एक 100% शारजाह अभिमुख ट्याक्सी कम्पनी। यद्यपि यो फर्म दुबई र अबु धाबी भित्र पनि सञ्चालनमा छ। शारजा ट्याक्सी कम्पनीलाई दुबई र अबु धाबीमा ट्याक्सी ड्राइभरहरूको आवश्यकता छ। तर, युएई लाइट ड्राइभिंग इजाजत पत्र आवाश्यक हुन्छ। अर्कोतर्फ, जीसीसी लाइट वैध इजाजतपत्र धारकले आवेदन दिन सक्छ। त्यसोभए, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको त्यो तपाईंको हातमा हुनेछ।
यस कम्पनीले राम्रो भुक्तानी गर्दछ, तपाईं AED कमाउन सक्नुहुन्छ। 3,000 / - लाई AED.10,000 / - मा प्रति महिना तपाइँ 8h एक दिन भन्दा बढी काम गर्दै हुनुहुन्छ। र सामान्यतया बोल्दै, यस्ता कम्पनीहरूको साथ तपाईं ती हुन सक्नुहुन्छ। कृपया तिनीहरूको अंग्रेजी वेबसाइट संस्करणमा एक नजर राख्नुहोस् र तपाई काम गर्न चाहानुहुन्छ भने मात्र लागू गर्नुहोस् ट्याक्सी चालकको रूपमा।
यहाँ लागू: http://thedriver.ae/contact-us.html
ड्राइभर कम्पनीसँग छ संयुक्त अरब अमीरात भर अनुभव ढुवानी। यो कम्पनीले युएईको लागि धेरै नवीन र अनौंठो सेवा प्रदान गर्दैछ। त्यसोभए, विवरणको आधारमा तपाईंले उनीहरूसँग कामको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
एक कम्पनी दुबईमा उबर कम्पनीसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। उदाहरण को लागी, तपाईं चालक कम्पनी कल गर्न सक्नुहुन्छ। र सामान्यतया बोल्दै, तिनीहरूले तपाईंलाई गन्तव्य बिन्दु पठाउँछन्। तिनीहरू दुबईको सडक र यातायात प्राधिकरण (आरटीए) को साथ दर्ता छन्। त्यसो भए, 100% सजिलो र कम्पनी बचत गर्नुहोस् जहाँ तपाई राम्रो भुक्तान गरिएको रोजगार प्रस्ताव पाउन सक्नुहुन्छ.
Tawasul Taxi (दुबई)
यहाँ लागू: http://www.tawasul.ae/
तावासुल ट्याक्सी मुख्यतया अरबी बोल्ने श्रमिकहरूको लागि कम्पनी हो। यद्यपि तपाइँले केहि रोचक रोजगार प्रस्तावहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीले मानक विकल्पहरू प्रदान गर्दै छ र तपाईंसँग इजाजतपत्र हुनु आवश्यक छ। तपाइँ उनीहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ कार प्रदान गर्नका बारे। तर त्यो अवस्थामा, तपाईंले धेरै कम पैसा बनाउनु हुनेछ जुन तपाईंले आशा गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईको आफ्नै कारसँग यो काम गर्नका लागि राम्रो कम्पनी हो।
इंडिगो किराए मा एक कार (दुबई)
यहाँ लागू: http://indigorentacar.com/contact
पेशेवर ड्राइभर सुरु गर्न राम्रो कम्पनी दुबईमा काम। इंडिगो भाँडामा एक कार असाधारण ग्राहक सेवामा फस्टाउँछ। त्यो तथ्य हो। इंडिगो भाडामा लिईएको एक कार कम्पनी मानहरू सरल छन्, तपाईंको ग्राहकहरूलाई खुशी पार्नुहोस् र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई खुशी पार्नुहोस्। त्यसोभए पक्कै पनि ए जस्तो देखिन्छ संयुक्त अरब अमीरातमा धेरै राम्रो कम्पनी.
इंडिगो कम्पनीले गर्ने सबै कुरा ग्राहकहरूसँग ड्राईभि around्ग घुमाउनको लागि बनाईएको हो। र निश्चित रूपमा यी उद्देश्यहरू हुन् व्यवसाय गर्न सही तरीका। दुबई ट्याक्सी ड्राइभिंग बजारको निरन्तर सुधारमा केन्द्रित इण्डिगोले युएईमा कार कम्पनी भाँडामा लिएको बाहेक।
सिटी 555 लक्जरी परिवहन LLC (दुबई)
यहाँ लागू: http://city555luxury.com/about-us/
शहर 555 लक्जरी यातायात LLC एक उत्तम वेबसाइटहरू भएको। यो संगठन 2007 मा सञ्चालन गर्दछ। र सामान्यतया बोल्दै, यो प्राथमिक गतिविधिहरू कार लक्जरी यात्रा हो दुबई र अबु धाबीमा सेवाहरू। व्यक्तिहरू उनीहरूको सेवाहरू क्रमशः होटेल अतिथि यात्राबाट। यसबाहेक, शपिंग मल्ल र रेष्टुरेन्टहरू सम्पूर्ण युएईमा टिप्न थाल्छ।
कम्पनीले युएईमा धेरै ठूला निगमहरूसँग सहकार्य पनि गर्दछ। त्यसोभए, रोजगारी खोज्नु एक रमाईलो र धेरै लाभदायक हुनेछ विदेशबाट कुनै पनि प्रवासीको लागि वा एमिरेट्सबाट स्थानीय नागरिकहरूको लागि.
जडान कक्ष (दुबई)
यहाँ लागू: https://www.limo-uae.com/contactus.htm
लिमोसिन, खेल कार र अद्भुत महँगो कार। यो सबै चौफेरको हो दुबईमा कम्पनी। कम्पनी चाफर्स ड्राइभर पेशेवर राम्रो प्रशिक्षित हुनुपर्छ। कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि साँच्चै उत्कृष्ट सेवा प्रस्ताव गर्व गर्दछ। त्यसोभए, तिनीहरूलाई कल गर्न वा वास्तवमै यो मूल्यवान छ तिनीहरूलाई रोजगार अनुरोध सहित एक ईमेल पठाउनुहोस्.
यो कम्पनीले धेरै सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। चाहे उनीहरूका ग्राहकहरूलाई दुबई एयरपोर्टमा यातायात चाहिन्छ। वा पनि एक एक अबू धाबी होटेलमा व्यापार बैठक। यसका साथै, एक व्यापार संगोष्ठी वा एक राम्रो-ब्रांडेड रेस्टुरेन्ट, यो फर्मले तपाईंलाई तिनीहरूको लिमोसिन भित्र आराम गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंसँग सुरक्षित तरिकाले ड्राइभ गर्दछ।
निजी लिमोसिन (दुबई)
यहाँ लागू: http://www.prvtlimousine.com/contact.html
हाम्रो सूची मा अर्को कम्पनी दुबई मा निजी लिमोसिन कम्पनी हो। निजी लिमोसिन युएई संस्था दुबई को एक दर्शन संग संचालित। मुख्य सेवाहरू पछिल्ला बर्षहरूमा विकसित गरिएको छ। त्यसो भए, सामान्यतया, VIP कम्पनीहरूसँग कामका लागि शीर्ष-स्तरका कामहरू हुन्छन्।
निजी लिमोसिन कम्पनीहरु संग काम गर्दा। प्रायः चालकहरूले दुबई र अबू धाबीमा विशेष चौंरी सेवाहरू प्रदान गर्नेछन्। कम्पनीले अब एक दशक भन्दा बढीका लागि ग्राहकहरूलाई वीआईपी प्रदान गर्दछ।
रयल स्मार्ट लिमोसिन (दुबई)
यहाँ लागू: http://royalsmartlimousine.com/contact.php
BMW श्रृंखला7र Lexus Es350 को साथ कम्पनी। लक्जरी यात्रा बजार मा एक वास्तवमै भारी कम्पनी। रोयल स्मार्ट लिमोसिन कम्पनी एक हो लक्जरी यात्रा वातावरणमा काम गर्न राम्रो विकल्प.
यो अद्भुत कम्पनी एक खाडी क्षेत्र मा कम्पनीहरु को रशेश अल जबरी समूह को एक सदस्य हो। कम्पनी 2002 मा राशन अल जाबरी द्वारा स्थापित भएको थियो। र तब देखि उनि एक कर्मचारी को एक राम्रो संख्या को भर्ती गर्दै छन्।
एक राम्रो यात्रा बजारमा तपाईंको क्यारियर र व्यक्तिगत अनुभव बढ्नको लागि राम्रो कम्पनी। यो संगठन धेरै विश्वसनीय छ, काम गर्न को लागी बचत गर्नुहोस्। र साथै सजिलैसँग धेरै बढी यातायात कामदारहरू भाडामा उपलब्ध। हो, कम्पनीहरु अझै सुपर द्रुत बढ्दै छन्। र स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी समुदायहरूलाई रोजगार दिन्छ।
वादी स्वाट ट्राफिक (दुबई)
यहाँ लागू: https://www.swattransport.ae/
राम्रो कम्पनी जहाँ तपाईं एक नौकरी हुन सक्छ। वादी स्वाट ट्राफिक कम्पनी न केवल गाडी भाडामा व्यापार हो। तिनीहरू यात्रुहरू प्राप्त गर्न र मिनी बक्सहरूमा यात्रा गर्न प्रबन्ध गर्दै छन्।
दुबई र अबु धाबीमा वादी यातायात एक अग्रणी बस भाडा व्यवसाय हो। तिमी सक्छौ यस संगठनको साथ काम गर्नुहोस् र बस वा minivans ड्राइभ। तर यो कम्पनीले युएईमा भाडामा लिन्छ। त्यसो भए, यदि तपाईं शारजा, दुबई र अबु धाबीमा बस भाडा कम्पनीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं यस कम्पनीको साथ कामका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ.
लिमो कार भाडा (दुबई)
यहाँ लागू: https://www.limoinuae.com/contact
लिमो कार भाडा कम्पनी उच्च-स्तरीय सेवाहरूको साथ। कम्पनीले दुबईमा प्रवासीहरूलाई भाडामा लिएको छ। तपाईं लेक्सस-टोयोटा र अधिक धेरै हुनेछ! यो कम्पनी एकदम चासो राख्ने फर्म हो कि तपाईंले तिनीहरूलाई कल दिनुहोस्। उत्तम तरिका मात्र हो केवल रिक्त स्थानहरूको बारेमा उनीहरूलाई सोध्नुहोस् र तिनीहरूलाई सकेसम्म छिटो प्राप्त गर्नुहोस्।
सुन्तला ओटो (दुबई)
यहाँ लागू: https://orangeauto.ae/contact-us/
गुगल नक्शा प्यार नारंगी ओटो कम्पनी। तपाई आफैलाई जाँच गर्न सक्नुहुनेछ नारंगी स्वत: बारे समीक्षा गर्दछ उनीहरूको गुगलमा मेरो व्यवसाय प्रोफाइल। सामान्यतया बोल्ने कम्पनी युएईमा एकदम राम्रो गतिमा चलिरहेको छ। यस जस्तो यातायात कम्पनीहरू संयुक्त अरब अमीरातमा उबरको राम्रो प्रतिस्पर्धी हुन्। तिनीहरू एक विशिष्ट कार भाडा व्यवसाय होईन तर रोजगारको लागि आवेदन दिन लायक.
Uber को बारे मा नबिर्सनुहोस् खाट (दुबई)
यहाँ लागू: https://uber.com/drive/delivery/
Uber यो Uber चालक नौकरिहरु को दुबई को एक अलग भाग मा खाती छ। तपाईं उदाहरणका लागि रेस्टुरेन्टहरूको जंजीरहरूको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ एमसीडोनल्ड्स वा पिज्जा हट र तपाईले राम्रो पैसा कमाउनुहुने भोलिपल्ट मानिसलाई खाना दिन दिनुहोस्।
यस प्रकारको काम प्राप्त गर्न तपाईंलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स गर्न आवश्यक छैन !. किनकी तपाइँ त्यसलाई सानो मोटरसाइकल वा एक बाइकमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाई त्यहाँ केहि महिना पछि काम निश्चित हुन्छ !. त्यसोभए, दुबईमा उबर चालक बन्ने बिरोध अर्को स्मार्ट तरिका हो।
ओला कार किराए मा लेना (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: https://www.olacabs.com/careers
ओला एक कार भाडा अनुप्रयोग र अब एक विशाल व्यापार हो। कम्पनीले विश्वास गर्दछ कि ट्राभल बजारको नवीनता एकदम महत्त्वपूर्ण छ। ओला कार भाडाका कर्मचारीले ओलाको ठूला लक्ष्यहरू र मानहरू समेट्छन्। विशेष गरी कम्पनी हो बेलायत र भारतमा राम्रो व्यवसायको प्रबन्ध गर्ने। ओला कार भाडा यसको सबै कर्मचारीहरु लाई अत्यधिक रचनात्मक यात्रा व्यवसाय अभ्यास गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
निजी ट्राभल उद्योगमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो सवारी साझेदारी कम्पनीको रूपमा। ओला कार भाडा एक उद्यमी, प्रयोगात्मक र विश्वव्यापी नवीन व्यवसाय!.
यहाँ लागू: https://www.gocatch.com/
GoCatch कम्पनी अष्ट्रेलियाको प्रीमियम ट्याक्सी ड्राइभिंग सेवा हो। यस कम्पनीको साथ यो धेरै विकल्पहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो कार चलाउन सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी अर्थव्यवस्था चालक साथै ट्याक्सी नेटवर्क ड्राइभर वा प्रीमियम ड्राइभर। यद्यपि यो कम्पनी पनि राम्रो साझेदारीको प्रस्ताव राख्दै। यदि तपाईंसँग आफ्नै फ्ल्याट छ भने तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो कर्मचारीहरू र कारहरू भाडामा लिन सक्नुहुन्छ।
GoCatch कम्पनी वेबसाइट अष्ट्रेलिया मा मीटर ट्याक्सी संग दर्ता गरिएको ट्याक्सी चालक को सबै भन्दा ठूलो फ्लीट सुविधा। को कम्पनी रोजगार पाउन यसको लायक छ। त्यसो भए, यदि तपाइँ Uber मा एक प्रकारको रोजगारी खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले निश्चित रूपमा अष्ट्रेलियाको गो क्याच वेबसाइटमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
Kapten ड्राइभर (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: https://www.kapten.com/
कप्टेन कम्पनीले केहि देशहरूमा हालसम्म काम गर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाई उनीहरुलाई फ्रान्स पेरिस, ल्यन र क्यान्समा भेट्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, लिस्बनमा सनशाइन पोर्तुगल र जेनेभामा स्विजरल्याण्ड। यो कम्पनी धेरै प्रतिस्पर्धी बजारमा सञ्चालनमा छ.
तिनीहरूका ड्राइभरहरू पेशेवर प्रशिक्षण र निर्देशित छन्। व्यावसायिक कार्यकारीहरूका लागि उत्तम ग्राहक सेवाहरू प्रदान गर्न। यस कम्पनीसँग काम गर्ने क्रममा ग्राहक सेवा तपाईंको क्यारियर को लागी मुख्य बिन्दु बन्छ.
स्थानीय, प्रतिक्रियाशील र बहु-च्यानल ग्राहक सेवा।
Gett Taxi (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: https://gett.com
गेट ट्याक्सी एक बढ्दो कम्पनी हो र उनीहरूको मुख्य बजार इजरायल, रसिया, ब्रिटेन र न्यू योर्क हो। यद्यपि यो कम्पनी यी स्थानहरूमा सीमित छैन किनकि उनीहरू भविष्यमा बढ्न खोजिरहेका छन्। त्यसोभए तपाईंले अवश्य पनि हुनुपर्दछ उनीहरूको क्यारियर वेबसाइट सेक्सनमा आवेदन गर्न प्रबन्ध गर्नुहोस् र उनीहरूले कुनै नयाँ स्थानीयकरण अपडेट गरेका छन्, उदाहरणका लागि दुबई वा अबु धाबी।
यहाँ लागू: https://cabify.com/en/drivers
Cabify सँग ड्राइव गर्नुहोस्। संसारभरको सुपर लोकप्रिय कम्पनी !.
यो कम्पनी भाँडाको लागि पहिलो रोजाइ हो, सुरक्षाको लागि पहिलो। र धेरै प्रख्यात कम्पनी जसले प्रवासीलाई काममा लिइरहेको छ। तपाईं विमानस्थलमा वा कार्य बैठकमा व्यक्तिसँग सवारी गर्न सक्नुहुनेछ र साइडमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ।
यस व्यवसायमा पैसा कमाउनु भनेको सामान्यतया मानिसहरूलाई काममा जान वा घर फर्कन मद्दतको कुरा हो। Cabify व्यवसाय कर्मचारीहरु, ग्राहकहरु वा उम्मेद्वारहरु को लागी हो। कोही पनि लागू गर्न र पैसा बनाउन सक्षम छ.
क्याबिफाईमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई राम्ररी थाँहा हुन्छ कि व्यवसायहरू विभिन्न विभिन्न कारणहरूको लागि यात्रा गर्छन् र कम्पनी बनाउने त्यो स्तर it तपाईको लागि मात्र फाइदा हुन्छ.
यहाँ लागू: https://www.ingogo.com.au/driver
इन्गोगो यो स्मार्ट स्मार्टफोन प्रसोधन टर्मिनलहरू व्यवस्थित गर्न सक्षम छन् जुन तपाईले जम्मा गर्न मद्दत गर्दछ र एक्सएनमक्स घण्टा अगाडी अनन्य बुकिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं आफ्नो दिन स्थानमा योजना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं व्यापार प्रबन्धकहरु र साथ साथै कर्पोरेट ग्राहकहरु जसले धेरै अधिक भुक्तानी तिर्नु पर्ने आदेश दोहोर्याउन सक्दछ।
कम्पनी अष्ट्रेलियाबाट हो र वास्तविक कल भएका मानिसहरूसँग प्राय: कल केन्द्र तपाईंको लागि त्यहाँ छन्। त्यसकारण, तपाईंले इन्गोगो कम्पनीलाई विचार गर्नुपर्दछ र सुरु गर्नुहोस्
सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन र पर्थमा स्थानहरू समर्थन गर्दछ। हामी आशा राखेका छौं कि तपाइँ तिनीहरूको सेवा मनपर्छ।
यहाँ लागू: https://www.itaxi.pl
यो कम्पनी ड्राइभरका लागि पोलिश सबैभन्दा लोकप्रिय कम्पनी हो। तपाईले पोल्याण्डमा पक्कै राम्रो कम्पनी पाउन सक्नुहुन्छ किनकि अब अर्थव्यवस्था फस्टाउँदैछ। iTaxi पोल्याण्ड मा मोबाइल अनुप्रयोग को उपयोग गर्न को लागी स्वतन्त्र र सजिलो छ। र यो कम्पनी तपाईंलाई पोल्याण्डमा उनीहरूका लागि काम गर्न दिन्छ। यद्यपि तपाई अंग्रेजी भाषा बोल्नै पर्छ।
ITaxi कम्पनी पोल्याण्ड मा सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड हो र सबै पोलिश शहरहरूमा सञ्चालन गर्ने क्रको र वारसालाई प्रदान गर्दछ जहाँ अधिकांश मानिसहरू विदेशी र अंग्रेजी भाषाको परिचित छन्।
यो कम्पनी एक मात्र कम्पनी हो कि तपाईंलाई प्रयोगको लागि हेरचाह प्रदान गर्दछ र तपाईं यस तरिकाले पैसा कमाउनुहुनेछ। आईट्याक्सीले प्रयोगकर्ताहरूलाई केवल पोलिश यातायात बजारमा विश्वसनीय र प्रमाणित ड्राइभरहरूको साथ जोड्दछ। त्यसैले तपाईं शान्त रहन सक्नुहुन्छ र गन्तव्य बिन्दुमा पुग्दा तपाईंको चीज गर्न सक्नुहुन्छ। पोल्याण्ड मा पैसा बनाउने र आफ्नो पठाउनुहोस् विदेशमा परिवार.
Lyft सँग ड्राइव गर्नुहोस् (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: https://www.lyft.com/driver
Lyft एक अमेरिकी कम्पनी हो र संयुक्त राज्य र क्यानाडामा धेरै लोकप्रिय छ। यद्यपि, यो सीमित छैन कि यो कम्पनी मध्य पूर्वमा पुग्ने छैन।
लिफ्टमा यसले तिनीहरूका चालकहरूको लागि धेरै राम्रो प्रणाली पाइरहेको छ र निश्चित रूपमा, यो राम्रो हो संस्था दुबै शहर मा सर्दा काम गर्न। अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छ कि लिफ्ट कम्पनीले युएईमा जान खोजिरहेको छ तर कम्पनीले सहि मिति पुष्टि गरेको छैन।
तपाईंले गर्नुहुने सबै कुरामा सबै कुरामा स्वाद स्वतन्त्रता, तपाइँको कामलाई राम्रो र आरामदायक हुन अनुमति दिँदै। ग्राउन्ड ब्रेकिंग आईडियाहरू बनाउने र अमेरिका र क्यानाडामा नविकरण र स्थिर उन्नति आयले तपाईंलाई एक राम्रो व्यक्ति बनाउँदछ कि निश्चित रूपमा।
LeCab Taxi (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: https://en.lecab.fr/our-services/order-cab-in-paris.html
लेकब टैक्सी यो दुबई उबर जस्तै फ्रान्स कम्पनी हो। एक LeCab कम्पनी प्रमुख पेरिस निजी चालक सेवा मात्र हो जुन केवल वास्तवमा मात्र पेरिसमा रहन सक्छ। यसैले, लेक्याबले एक सेवा सिर्जना गर्यो जुन हरेक पेरिस व्यक्ति प्रयोग गर्न मनपर्छ: आरामदायक, विश्वसनीय र सस्ती।
यो कम्पनी 2012 मा स्थापित भएको थियो र त्यस पछि कम्पनीलाई केही साधारण विचारहरूमा बनाइएको थियो जुन मानिसहरूलाई ट्याक्सी र उबेर जस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। LeCab पेरिस लाई ट्याक्सी र व्यक्तिगत कारको विकल्प दिन्छ। र विस्तार हुँदै गइरहेको छ अंग्रेजी भाषामा पनि।
यहाँ लागू: http://www.bitaksi.com/en/
सवारी गर्न धेरै सजिलो छ, दुई टाक्सी यो एक कम्पनी हो भविष्यको विकास। यो कम्पनी इस्टानबुल र टर्कीमा अन्कारामा सबै भन्दा राम्रो ट्याक्सी सेवा हो। तपाईं जहाँ भए पनि फरक पार्नुहोस् वा तुर्की आउन पनि सक्नुहुन्छ र बिटकसीबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ।
यस जस्तो कम्पनीसँग, सामान्यतया बोलेमा, तपाईले बढि जानकारीको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ र रोजगार अफरको साथ वास्तविक ईमेलमा अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाइँको ग्राहकहरु क्रेडिट कार्ड वा नगद द्वारा तिर्न सक्षम छन्। कम्पनीले असक्षम ग्राहकहरुलाई पनि लिदै छ, तपाई धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ.
डिडी ट्याक्सी (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: http://talent.didiglobal.com/
दीदीले धेरै देशहरू, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, चीन साथै जापान र मेक्सिकोमा सञ्चालन गर्दछ। त्यसोभए, यो एक संगठनको लागि लायक छ एक नजरका लागि। तिनीहरू अनुभवी प्रबन्धकहरू खोज्दैछन्, विश्वविद्यालय स्नातक र इन्टर्न्स।
दीदी ट्याक्सी एक्सप्याट्सका लागि राम्रो परिवहन कम्पनी हो। तपाईंले उनीहरूका रिक्त पदहरूमा एक नजर राख्नुपर्दछ किनभने त्यहाँ धेरै इच्छुक रोजगार प्रस्तावहरू छन्.
Transfer.com प्राप्त गर्नुहोस् (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: https://gettransfer.com/en/carrier/new
यस कम्पनीले दुबई र अबु धाबीमा अपरेटहरू सुरू गर्नका लागि हाल उनीहरूको अफिसलाई सार्दै छ। त्यसोभए, निश्चित रूपमा तपाईको वेबसाइटमा तपाईले हेर्नु पर्छ। हामीलाई आशा छ कि यो कम्पनी दुबईमा छिट्टै नै उपलब्ध हुनेछ, त्यसोभए तपाईको अनुप्रयोग खोल्नुहोस् gettransfer.com संग।
कम्पनी धेरै समान हुनेछ जस्तै दुबईमा एक यूबर चालक बन्ने हो भने तपाईले मात्र सन्देश उठाउनुहुनेछ र छनौट गन्तव्यमा सामान वा भौतिक व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुहुनेछ।
ट्रान्सफर कर्मचारीहरू आउटपुट-केन्द्रित, मेहनती र निजी यात्रा व्यवसायको बारेमा भावुक हुनुको मूल्य बुझ्न। त्यसो भए, Transfer.com प्राप्त गर्नुहोस् तपाईंलाई निश्चित रूपमा मूल दृष्टिकोण प्राप्त गर्न दिशामा काम गर्न मद्दत गर्दछ र एक अरब मानिसका लागि गतिशीलता निर्माण गर्नुहोस्।
सजिलो टैक्सी (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: http://www.easytaxi.com/
इजी ट्याक्सी धेरै अधिक कोलम्बिया, अर्जेन्टिना र मेक्सिको कम्पनी सम्बन्धित अनुप्रयोग हो। यद्यपि तिनीहरूको पृष्ठहरू हेर्नु यो उचित छ। साधारणतया यो कम्पनीले कार्यालय खोल्न सक्छ दुबई वा अबु धाबी निम्न बर्षहरूमा र मध्य पूर्वको बजारमा सर्नुहोस्.
तिनीहरूको विकल्पहरूमा हेर्नुहोस्, कसलाई थाहा छ उनीहरूसँग विश्वभरि अनुभवी कामदारहरूको लागि केहि रोजगार हुन सक्छ। र तपाई ईजी ट्याक्सीको लागि विदेशमा काम गर्न चासो पनि दिन सक्नुहुन्छ।
Grab Taxi (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: https://grab.careers/
राम्रो कम्पनी! ग्र्याब कार किराया संगठन मा अग्रणी राइड-अर्डर अनुप्रयोग भन्दा बढि हो दक्षिण पूर्व एशिया। कम्पनी ठूलो लगानी संग एक बहुराष्ट्रीय व्यापार हो। कम्पनीले भर्खरको डाटा प्रणाली र सबै भन्दा उन्नत टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी यातायातदेखि भुक्तान र दक्षिणपूर्वी एशियामा सबै चीजहरूको सुधार गर्न सबै सुधार गर्न।
ग्याब कम्पनी कम्पनीका परियोजनाहरू र प्रणालीहरूसँग नजिकै काम गर्दै छन्। साथै तिनीहरूका चालकहरू, यात्रीहरू र धनीहरू आनन्दित छन्। सबै यस कम्पनीमा खुसीसाथ काम गर्न राम्रो आकारमा देखिन्छ।
दुबई ट्याक्सीको उद्देश्य व्यक्तिलाई एशिया क्षेत्रको साँचो क्षमता अनलक गर्न दुबै व्यक्तिलाई दुबईमा (प्रकारको) प्रकारको नौकरीमा एक Uber चालक बन्ने।
तिनीहरू समस्याहरू हल गर्दैछन् जुन अधिक जनसंख्या प्रगतिलाई व्यवस्थित गर्दछ। यदि तपाईं ड्राइभिंग दक्षिणपूर्व एशिया फर्वार्डको कम्पनी दर्शन साझा गर्नुहुन्छ भने, आज उनीहरूको टोलीमा सामेल हुनको लागि आवेदन दिनुहोस्.
कम्पनी मिलाउनुहोस् (अन्तरराष्ट्रीय)
यहाँ लागू: https://careers.taxify.eu/
ट्यासिफाइ एक उबर पछि मात्र दोस्रो कम्पनी हो। कम्पनीलाई टैसिफाइ गर्नुहोस् यो उबरको लागि धेरै राम्रो प्रतिस्पर्धी हो। सामान्यतया, धेरै व्यक्ति वास्तवमा विश्वभरि यस कम्पनी प्रयोग गरिरहेका छन्। यदि हामीले यो आयोजक लिइरहेका छौं र हामी त्यसलाई उबर कम्पनीसँग तुलना गर्नेछौं। निश्चित रूपले एक धेरै राम्रो बढ्दो संगठन प्राप्त गर्दछ जहाँ तपाईं संयुक्त अरब एमिरेट्समा पनि काम पाउन सक्नुहुन्छ। यस क्षणमा यस कम्पनीसँग दुई हात भन्दा बढी स्थानीयकरण छ।
यस कम्पनीको अर्को स्मार्ट विचार हो कि यस कार्यले कुनै क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दैन यदि तपाईंसँग तपाईंसँग कुनै पनि भुक्तानी विकल्पहरू छैन जुन तपाईं सामान्यतया बोल्न सक्नुहुन्छ, अझै ड्राइभ गर्न जारी राख्नुहोस् र त्यो पैसा पछि तिर्नुहोस्। त्यसोभए यदि हामी यस कम्पनीलाई अन्य ट्याक्सी कम्पनीहरूसँग तुलना गर्छौं भने हामी यो भन्नेछौं पक्कै राम्रोसँग काम गर्नका लागि राम्रो ठाउँ हो.
यो कम्पनी इस्टोनियामा युरोपियन युनियन देशहरूमा आधारित छ उनीहरूको मुख्य कार्यालय त्यहाँ रहेको छ। तर यदि हामीले ती लिन्छौं भने तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतमा काम गर्दैछन् संयुक्त राज्य अमेरिका क्यानाडा र युरोपियन युनियनका धेरै देशहरू। त्यसैले यदि तपाइँ विदेशमा रोजगार खोज्दै हुनुहुन्छ यो कम्पनी हो निश्चित रूपमा रोजगार प्राप्त गर्न को लागी एक स्मार्ट तरीका.
तपाई जानु अघि - दुबईमा डेमरित बिन्दुहरू!
दुबईमा, तपाईंको दुबई ड्राइभिङ्ग लाइसेन्समा डाइमरिट बिन्दुहरु लाई ड्राइभिङ्ग गर्दा प्रतिबद्धताबाट प्रतिबद्धता प्राप्त गर्दछ। यदि तपाईं एक Uber चालक बनने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई विचार गर्न आवश्यक छ तपाइँसँग कति डेमीटिट बिन्दुहरू छन् भनेर जाँच गर्नुहोस्। यो तपाईंको कागजात जाँच गरेर वा सडक र ट्राफिक प्राधिकरणलाई सम्पर्क गरेर जो ड्राइभ इजाजत पत्र जारी गर्न सकिन्छ। दुबईमा एक Uber चालक बन्यो हाम्रो कम्पनी संग धेरै सजिलो छ।
त्यसैले, यदि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ राम्रो काम साइट। किनभने चालक अवसर भेट्टाउन पनि। तपाई हुनु पर्छ स्थानीय जागिर बोर्ड जाँच गर्नुहोस्। र त्यहाँ चालकहरु को लागि एकदम सही नौकरी मिल। भाग्यले साथ दिओस्।
आशा छ कि तपाईं दुबई मा दुबई नौकरिहरु मा मिल जाएगा
तथापि, हामी अब संयुक्त अरब अमीरात मा चालक नौकरी को लागि भर्ती गर्दै छन्
एक खोज्नुहोस् दुबई मा नौकरी संग हाम्रो कम्पनी छक्क परे तपाई त्यो सपना रोजगारी पाउन सक्नुहुनेछ छिटो बाटोमा हाम्रो कम्पनीको पुन: सुरू गरेर अपलोड गरेर।
बस पुनः फेरि सुरू गर्नुहोस् र एक सुरू गर्नुहोस् दुबईमा नयाँ चालक कार्य।
पुन: सुरु गर्नुहोस् पृथ्वीमा सबैभन्दा छिटो बढ्दो शहरमा! - दुबई सिटी कम्पनी।